जान्नुहोस् ! यस्ता छन् केटीलाई आकर्षित गर्न सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु
मे 28, 2019 मे 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments केटी
भनिन्छ, केटीलाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो । केटीका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अविश्वसनीय तथा दुर्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । भनिन्छ, कुनै पनि सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह हुनु हुँदैन । तर, सबै सम्बन्धमा यो भनाई लागु हुँदैन ।
कतिपय सम्बन्धहरु प्रश्नकै कारण थप मजबुद र कसिलो बन्छ । मुख्य कुरा कोसँगको कस्तो सम्बन्धमा कस्तो र कसरी प्रश्न सोध्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । यहाँ हामी विशेषतः आफ्नो पार्टनरसँगको सम्बन्धका कुरा गर्दैछौं । यदि तपाईको प्रश्न पार्टनरको इच्छा र आकंक्षासँग जोडिएको छ भने तपाईहरुको सम्बन्ध झन प्रगाढ बन्न जान्छ । कस्ता प्रश्नले तपाईको सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत गर्छ त ? केटीलाई आकर्षित गर्न सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु निम्न अनुसार छन् ।
१. हाम्रो प्रेमलाई गहिरो बनाउन के गर्ने ?
यो प्रश्न तपाईको प्रेम सम्बन्ध गहिरो बनाउनको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । एक अर्काबिच भएको असमझदारी हटाउन चाहनुहुन्छ भने यो प्रश्न तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छ । यदि तपाईहरु बीचको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईको पार्टनरलाई विशेष महसुस गराउन चाहनुहुन्छ भने यो प्रश्न अवश्य सोध्नुहोस् ।
२. म तिमीलाई कसरी प्रेम व्यक्त गँरु ?
धेरैजसो जोडीहरुले प्रेम दर्शाउनको लागि ‘आइ लभ यू’ शब्दको सहायता लिन्छन् । प्रेम व्यक्त गर्नका लागि यो मात्रै अन्तिम विकल्प होईन । तपाई जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसको लागि प्रेम देखाई हाल्नुहोस् । हुन सक्छ, तपाईको पार्टनर पनि यहि चाहन्छिन् कि तपाई प्रेम व्यक्त गर्नको लागि तीन शब्दको प्रयोग गर्नुको सट्टा प्रेमले भरिएको स्पर्श गर्न सक्नु हुनेछ अथवा प्रेमीले नजर लगाउन सक्नु हुन्छ । ताकी तपाईको स्पर्श र नजरबाट उनले तपाईको प्रेम बुझोस् ।
बिहानको सुरुवात ‘मर्निङ किस’ बाट गर्नुहोस् । पार्टनरको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने बानी बसाल्नुहोस् । नयाँ घटनाक्रमबारे अपडेट गराउनुहोस् । घुमफिर र खानपिनको रिक्वेस्ट गर्नुहोस् । सञ्चो विसञ्चो सोध्न र विसञ्चो हुँदा हेरचाह गर्न नभुल्नुहोस् । ताकि तपाईले नभनिकनै कति माया गर्नुहुन्छ भनेर तपाईको पार्टनरले महसुस गर्न सकोस् ।
३. तिमी ममा कस्तो परिर्वतनको अपेक्षा राख्छौ ?
कहिलेकाँही तपाईले जानेर वा नजानेर गरेको कार्यहरुले तपाईको पार्टनरले असहज महसुस गर्छिन् । यस्तोमा तपाईले उसलाई केही कुरा पनि भन्न संकोच मान्नु हुँदैन् । यस्तो स्थितिमा पार्टनरले तपाईको कुन बानी बदल्न चाहन्छ, यो प्रश्नले तपाईलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ । जुन कुराले तपाईको पार्टनरलाई नराम्रो वा असहज महसुस गराउँछ त्यस्ता कुराबाट टाढै बस्नुहोस् । जसले तपाईहरुबीचको सम्बन्धमा दरार आउँदैन । सम्बन्ध झनै कसिलो बन्छ ।
४. कहाँ जान चाहन्छौ ?
हुन सक्छ, तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई घुमाउनको लागि बिदेशको कुनै महंगो शहर लान सक्नुहुन्न । यसले तपाईको प्रेम सम्बन्धमा असर पार्छ भन्ने सोच्नु तपाईको भ्रम हुन सक्छ । आसपासमा भएको कुनै सपिङ मल, गार्डेन, मन्दिर, पार्क वा कुनै तपाईको पार्टनरलाई मनपर्ने ठाउँमा घुमाउनको लागि लान सक्नुहुनेछ । यसरी घुम्न जाँदा उनको केयर गर्न र उनको मनको चाहनालाई ख्याल गर्न जरुरी छ । यदि तपाई उनको पार्टनरको मनपर्ने मन नपर्ने कुराको ख्याल राख्नुहुन्छ भने तपाईहरु बीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुन्छ ।
५. मसँग कस्तो महसुस गर्छौ ?
यो प्रश्नले तपाईको पार्टनरसँग सम्बन्ध कस्तो छ भनेर बुझाउँछ । आपसमा यस्तो प्रकारको कुराकानीले तपाईहरु झन नजिक आउनुको साथै तपाईहरुबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र बलियो बनाउन सघाउ पुर्याउछ ।
६. म तिम्रो काममा कसरी मद्दत गर्न सक्छु ?
तपाईले आफ्नो सबै काम गरिसक्नु भएको छ । तपाईसँग खाली समय बाँकी छ भने आफ्नो पार्टनरलाई काममा सघाउनुहोस् । धेरै कम व्यक्तिले मात्र यस्तो कुरा सोच्न सक्छन् । तपाई फ्रि हुने बित्तिकै आफ्नो पार्टनरलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, ‘म तिम्रो काममा कसरी मद्दत गर्न सक्छु ?’ आज उनको लागि कफी बनाईदिनुहोस् वा घरमा उनले गर्ने कुनै काम गरि दिनुहोस् अथवा उनी काम गरिरहेकै ठाउँमा गएर सघाई दिनुहोस् । सहयोगसँगै एक नजर दिएर फिस्स मुस्कान छरिदिनुहोस् । तपाईको एक मुस्कानले उनको मन ऊर्जाले भरिपूर्ण हुन्छ ।
← श्रीमद्भगवद गीताका जीवनोपयोगी अनमोल वचनहरु
घुम्न कतै जान लाग्दा सुटकेसमा सामान अटेन, यसो गर्नुहोस् →